Mon, Mar 25, 2019 | 15:16:42 NST
11:12 AM ( 11 months ago )
युएई, वैशाख २ – तीन वर्ष अघिसम्म युएईमा रहेको नेपाली दूतावासमा एमआरपी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) बनाउनेको घुईचो थियो । त्यही भीडमा पुग्ने नेपाली कामदारले महिनौं लगाएर राहदानी पाउँथे । पासपोर्ट कहिले आउँछ ? मेरो पासपोर्ट किन आएन ? दूतावासले समयमा सही सुचना किन दिएन ? भन्दै गुनासो सहित दूतावास पुग्दा दूतावास अस्तव्यस्त भएको सेवाग्रही आफैंले सुनाउँथे ।
तर अहिले यो समस्या न्युन मात्रै होइन प्राय शून्य छ । त्यसो त अहिले एमआरपी बनाउनेको घुइँचो उहिले जस्तो छैन । तर गएको महिना भने दूतावासमा भीड बढेकोे थियो । युएई आउने कामदारले भिसा पाउन अनिवार्य पुलिस रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने नियम ल्याएकाले यस् बारे बुझ्न दूतावास आउने नेपालीको सख्या ह्वात्तै बढ्याे।
तर यस पटक आफूलाई चाहिएको सुचना कहाँ गएर कसलाई सोध्ने भन्ने बारे दूतावास पुग्ने कसैलाई झनझट खेप्नु परेन । दूतावासको मुख्य ढोकाबाट सजिलै प्रवेश पाईन्छ । मुल ढोकाको अगाडि भेटिनुहुन्छ दूतावासका स्थानीय दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी दस्तुरसिङ बस्नेत ।
उहाँले दूतावासमा कार्य विभाजन गरिए अनुसार सूचना लिन आउनेलाई सम्बन्धित कुटनैतिक कर्मचारीको कक्षमा जान सुझाव दिनुहुन्छ । त्यसो गर्दा एउटा व्यक्ति धेरै बेर भुलिनु पर्दैन ।
अहिले आइतबार १ सय भन्दा धेरै र अरु दिन ८० जना भन्दा धेरै सेवाग्राही दैनिक दूतावास आउने गरेका छन् । सेवाग्राहीकोे भीड केही कम भए पनि कर्मचारीलाई कामको चाप भने उतिकै छ ।
आजभोलि दूतावासमा विभिन्न विषयका सूचना लिनेहरुको सख्या बढ्दोे छ । सामान्य विषयको सूचना लिन समेत दुतावास पुग्ने सेवाग्राहीलाई प्रविधिले सहज बनाएको त छ तर सबैले त्यही सुविधा बारे जानकारी पाएका भने छैन ।
दुतावासले यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारलाई लक्षित गरि दुतावासको आधिकारिक वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न गतिविधी र सूचना राख्दै आएको छ । यिनै माध्यम प्रयोग गरेर विभिन्न विषयका सूचना माग्ने र प्रतिक्रिया जनाउन पनि दिन पाइन्छ ।
दूतावासका सूचना तथा आम नागरिकले मागेको सुचना प्रदान गर्न द्वितीय सचिव कृष्ण अर्याललाई सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ । दूतावासको प्रतिक्षा कक्षामा डिजीटल बडापत्र समेत राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सोधिएका कतिपय विषयलाई महत्वका आधारमा दूतावासले सुनुवाई गर्ने गरेको छ । कार्यलय समय भन्दा बाहिरको समयमा पनि सेवाग्राहीका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने गरिएको अर्यालले बताउनुभयो ।
खासगरी घरेलु महिला कामदारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध सम्बन्धमा धेरैले जानकारी माग्ने गरेका छन् । त्यस्तै भिसा नविकरण, नयाँ भिसा प्रक्रिया, पुलिस रिपोर्ट, दूतावासबाटै गरिने भनेको पुनः श्रम स्वीकृती लगायतका बिषयमा धेरैले दूतावासमा सोध्ने गरेको अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै परिवारका सदस्यलाई भिजिट भिसामा ल्याउँदा चाहिने कागजात, युएईमा फेरिएका कानुन र नियम लगायतका विषयमा सूचना माग्नेहरु पनि धेरै छ । अन्य देशका नागरिकले पनि भिसा पक्रिया लगायतका अन्य विषयमा सूचना लिने गर्छन् ।
दूतावासको फोन नउठ्ने सेवाग्राहीको गुनासो अहिले पनि छ । ‘हट लाइनको व्यवस्था नगर्दासम्म यो गुनासो कम हुने देखिदैन’, ‘त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं,’सूचना अधिकारी अर्यालले भन्नुभयो ।
फोन उठ्दैन भन्ने गुनासो आएपछि एक महिना अघिबाट सबै कुटनीतिक कर्मचारीको मोबाइल नम्बर समेत वेबसाइटमा राखिएको छ । आफ्नो काम अनुसार चाहिएका कर्मचारीलाई फोन गरेर सूचना लिन सकिने दूतावासले जनाएको छ ।